Umcocisi weqhwa we-SG400
Idizayini ebunjiwe ye-engeli yomkhawulo wokusika ngamandla ngamandla nemisebenzi yokusika ngokunemba, inika amandla iqhwa eligingqikayo enkingeni ukunciphisa ukumelana futhi lifinyelele emiphumeleni emihle yokusebenza kwemishini yokuzilungisa iqhwa.
Idizayini ebunjiwe ye-engeli yomkhawulo wokusika ngamandla ngamandla nemisebenzi yokusika ngokunemba, inika amandla iqhwa eligingqikayo enkingeni ukunciphisa ukumelana futhi lifinyelele emiphumeleni emihle yokusebenza kwemishini yokuzilungisa iqhwa. I-engeli ephezulu yokusebenza kwekhaba ingu-127, okungukukhetha okungcono kakhulu kwezindawo zokupaka iqhwa.
Ukufinyelela kumiphumela emihle yokuhleleka ngegeja leqhwa elithuthukisiwe, izenzo ezilula ezisebenza ngokuya ngemizila ehlukile yesithwathwa. Futhi i-engeli ephezulu yokusebenza ingafinyelela ku-152 °.
Ukwamukela isixhumanisi samandla aphakeme kanye nebhande elifinyelela ekubambeni okungenakulinganiswa nokukwazi ukukhuphuka, okuhambisana nemizila yeqhwa ngokuphelele.
I-cab ifakwe ngesihlalo somoya-sentwasahlobo esitholakalayo se-30 ° sokuzungeza ohlangothini lwesobunxele nakwesokudla, ne-lever yokulungiswa kwama-multi-angle nokuhlanganiswa kwe-ergonomics ukuvikela ukukhathala kahle.
Ukwamukela amaleveli wokusebenza wakudala wokulawula, ukuqaphela ukunemba kokuthinta kokusebenza, ukusebenza okuguqukayo, ukuhlinzeka ngokunemba kokusebenza kokusebenza kwe-opharetha.
Ngokusebenza okuphelele nokuphakeme kwesibani se-LED nesistimu yokukhanyisa ehlakaniphile, nika amandla umshini ophelele ukuba uthandeke, futhi ube nombono ohluke kangcono womsebenzi wasebusuku.
Ukuphakama (Kubandakanya amazinyo wethrekhi) 4300 mm
UMax. ububanzi blade 5400mm
Ububanzi obukhulu begeja 6300mm
Isisindo somzimba omkhulu 6926kg
Isisindo sethrekhi 850kg
Isisindo blade 500kg
Isisindo segeja 894kg
Isisindo somshini wonke 9170kg
Ububanzi bokujika I-Pivot Steering
UMax. Ikhono leBanga 45 °, 100%
UMax. Yejubane lokuhamba 18.5km / h
Amandla wepulatifomu wangempela 800kg
Imodeli I-QSL 8.9
UMax. Ama-torque 1500N.m / 1500rpm
Ukusetshenziswa Kophethiloli I-19L / h
Amandla kaphethiloli 260 L
Umfutholuketshezi Ukudluliswa kwamandla System
Umfutholuketshezi System for travel I-DAFORS 100cc futha nemoto
Umfutholuketshezi System for iqhwa igeja Iphampu ye-DAFORS 75cc.
Ukunciphisa iGiya IBANGFLE
Isihlalo somqhubi omkhulu maphakathi kwekhumbi, ukumunca umoya, ama-airbags amaningi, okufudunyezwa kutholakala ngogesi.
Ama-co-opharetha izihlalo ezimbili zabasebenzisanayo ababili ezinhlangothini zombili.
Ukubuka isikrini Ukubonisa okumibalabala okungama-intshi ama-7.
Ukulawulwa kokuhamba nge-classic lever control.
Izesekeli zokulawula I-Ergonomics, konke ku-lever eyodwa yokulawula.
Uhlelo lokukhanyisa nokushisa.
Uhlelo oluphelele lokukhanyisa i-LED
Ngaphambili nangaphandle kwamafasitela anohlelo lokushisa kagesi
Isipili sangemuva ngokushisa kagesi nokulungiswa
Langaphambilini HBXG-SC360.9 Excavator
Olandelayo: SHEHWA-380-DTH womoya Drilling Rig
Ugandaganda Igeja Elilima